Midowga Yurub: “Hala joojiyo doomaha ka sameeysan goomaha ee Liibiya loo dhoofiyo!” | Somaliska
Midowga Yurub: “Hala joojiyo doomaha ka sameeysan goomaha ee Liibiya loo dhoofiyo!”
Xaaladaha qaxootiga ee ku soo firxayana badaha halista ah ayaa haatan Midowga Yurub waxaa ay doonayaan in gebi ahanaba la joojiyo, gaar ahaan iibinta doomaha macmalka ee ka sameeysan goomaha iyo kuwa matoorada saaran ee loo dhoofiyo dalkaasi.
Kulan ay wasiiradda arrimaha dibadda Midowga Yurub ku yeesheen magaaladda Busels ee dalka Biljim ayaa isku waafaqay in waxyaabaha qaar ee Liibiya loo dhoofiyo gaar ahaan badeecaha ama alaabada u sahlaya in lugu soo daad gureeyo qaxootiga ka imaya Liibiya. Midwoga ayaa isku af gartay doomaha macmalka ah ee caagadaha ka sameeysan iyo kuwa matoorada ku rakiban aan loo dhoofiyo dalkaas. Waxaana qoraal ay soo saareen wasiiradda ku sheegeen in ay tani qeyb ka noqoneeyso hakinta qaxootiga Liibya ka soo qul qula.
Magaaladda Roma ee caasimadda Talyaaniga waxaa ay la daala dhaceeysa qaxooti oo eeysan awoodin ineey keligeed maareeyn karin. Talyaaniga ayaa haatan runsan in Midowga Yurub ay ku fiirsanayaan wacdiga ah ee halkaasi yaala. Talyaaniga ayaa sheegay in Midowga Yurub aannu dooneeyn in lala qeeybsado qaxootiga Neeyjeeriya iyo Bagaaladeesh.
“Waa arrin qalad ah in dadyowga ay iskaga dhex meereeystaan dalalka Yurub ka dibna la siiyo diidmo” ayey tiri Margot Johansson oo ah wasiiradda arrimaha dibadda Iswiidhan oo kulankaas ka qeyb qaadaneeysay iyadoo u warameeysay wakaaladda wararka Iswiidhan u faafisa ee TT.
Dhinaca kale wasiiradda waxaa ay sheegtay in iyadda madaxa heya’dda qaxootiga adduunka ee Bil Swing ay gaareen dalka Liibiya, halkaas oo ay xaaladda guud ee dalkaasi ku sheegtay mid halis ah. Wasiiraddu waxaa kale oo ay tilmaantay in jirto baahi dhinacyo badan ah oo ah kuwo xal u noqon kara hakinta qaxootiga ku soo jabay qaaradda oo ay ka mid yihiin, waxbarashadda, shaqada si beey tiri dhalinta halkaas joogta ay u dareemaan ineey heeystaan mustaqbal.
Ugu dambeyntiina Sanadkan aynu ku jirno ee 2017-ka, ayaa waxaa qaaradda Yurub soo gaaray dad lugu qiyaasay shagaan kun kuwaas oo badankooda ka yimid dalka Liibiya.